-5 TOP nolosha jabsiga hooyo "maalin" la carruur badan | NASASHADA - 2018
Top-5 lifjhak "maalin shaqo" hooyo weyn
Dadku waxay badanaa i weydiiyaan: "Sidee ayaad ula dhaqmeysaa carruurta 4?". Xaqiiqdii, laga bilaabo dibedda, waxay u muuqataa "cabsi" oo aad u adag. Iyo, dhab ahaan, waxaa jira xaalado marka gacmuhu dhacaan. Xaaladda muhiimka ah, haddii mid ka mid ah caruurtu ay bilaabaan in ay waxyeellaan, iyo ka dibna isaga oo dhan. Xaaladahan oo kale waxay xoojineysaa, tan xigta oo aadan fahmin "sababta, sababta iyo mudada uu soconayo" ...
Waxaad qori kartaa wax badan oo ku saabsan nolosha, "maalinta shaqada" ee hooyo weyn. Hase yeeshee, ficil ahaanba mid kasta oo ka mid ah haweenkan ayaa diyaar u ah inay ka wadaagaan xirfadahooda talada ugu waxtarka badan iyo faa'iido leh.
Kacaawin ilaa subaxda.
Kacaawin ilaa subaxda
Sidaa darteed, subaxda tooska ah ee carruurta ku jirta xannaanada ama dugsiga, iyaga oo aan jeexin sariirta! Isku day fiidkii inaad diyaariso dhar, kabo, wax walba oo gacanta ku jiray. U ogolow ilmahaaga inuu sariirta ku seexdo, ka soo kabso hurdada, la hadal isaga, u samee maalin wanaagsan oo xiiso leh. Ha jeexin sariirta, si uu u socdo si dhakhso ah u dhaqidda, cunista, iwm. Tani waa nooc ka mid ah diiqada habka dareenka, cunuga ayaa leh niyad jab. Haddii aad xiiseyneyso, waxaa jiri doona wax aad u xiiso badan, dhadhan fiican leh, xiiso leh. Waxa ugu muhiimsan ee "wax" waxay ahayd in ilmuhu jecel yahay wax badan. Tani had iyo jeer waa "menu" ee hay'adaha carruurta.
Marna ha ku qasbin ilmo inuu wax cuno ilaa subaxda, sababtoo ah wuxuu heystaa fursad uu cuno xannaanada, iskuulka. Haddii ay dhacdo xaalad deg-deg ah, u dhiib wax adiga kula jira. Haddii aad tahay qof aad u welwelsan tahay cuntada, kaliya aad weydiisato in ay hooy waxa uu jecel yahay inta badan oo dhan in la cuno (ka shiilan, macmacaanka, buskudka, iwm jeedin dareenka). Mar labaad, u diyaari maaddooyinka horey loo sii wado, tan iyo subaxnimadii oo aad u yarayd diyaarintaas. Ha ku qasbin caruurta inay wax cunaan, soo bandhigaan. Inta badan carruurta sida "cunto" waxay keenaan matag.
Maalmahaas oo keliya marka aabuhu guriga joogo. By habka guud ee faraha kula carruurta, aabe, ha ku daateen biyaha, waxay yeelan doonaan xumbo dheeraad ah, muraayad ka imanaya qolka fadhiga la qubeyska geed isbonji la maydhay ... laakiin ugu danbeyn waxaad ka heli doontaa natiijo la doonayo, carruurtaada inay nadaafadda iyo si baro.
Ku dhowaad dhammaan carruurta oo aan hareeraysan, waxay cayaaraan, la dagaallamaan, waxay koraan meelaha ay u baahanyihiin. Tani waa nidaam caadi ah. Laakiin, badanaa waalidku ma laha dulqaad ku filan. Haddii carruurta la diriraan, boodi, guuxi, ama ha maqlina, tuur wax walba si dhakhso ah jidka socod ku saabsan nooca, kaynta banaanka! Laga soo bilaabo walxahaas oo kale ma diidaan weligood. Iyo intee ayey ku fiicantahay halkan: hawo nadiif ah, jimicsi, "maskaxaha xayiraadda" waalidiinta. Tani waxay daali doontaa carruurta, waxay si dhakhso ah u dhici doonaan oo ay noqon doonaan kuwo nabdoon. Dabcan, marka cimiladu aanay u oggolaan, kaliya la cayaar cayaarta ciyaaraha jilicsan, dib u dhig arrimahaaga.
Aabe iyo hooyo.
Aabe iyo hooyo
Ha iloobin "malab" bisha, xiriirka ugu fiican ... Hadda waa waqtiga loogu talagalay carruurta. Ku faraxsanow oo raaxeeyso wakhtiga ay caruurtu heystaan ​​hurdada ugu horeysa. Maxaad u qabanqaabin casho jaceylkan waqtigan? Si aad wadnaha ula hadasho wadnaha ama aad uga baxdid "qaadashada" hawo nadiif ah inta ilmuhu hurdo ...
Nolosheenna - waa xargaha cad, garaac madow, haddii kale ma dhicin. Xaqiiqdii, maaha mid cabsi badan oo ah hooyo carruur ah. Tani waa farxad, oo aadan u maleyn inaad naftaada si ka duwan u qiyaasi kartid ...
Isbedelka iyo si tartiib ah u gudubka miiska guud
Waxaan abuurnaa xaalado wanaagsan oo loogu talagalay dabeecadaha wanaagsan ee carruurta.
Sidee loo baraa cunuga dheriga?
Maxaa dhacaya haddii ilmuhu si joogto ah u dhaco?
Qoyska ballaaran waa labadaba farxad iyo tartan. ilaa aniga qudhayduna waxaan ku koray qoys wayn ogahay oo dhan oo ku saabsan on praktike.No rumaysan aan wax walba waa sidaas oo dhibaato iyo dhib sida qoysaska kale .Bishii heerka koowaad ee koorsadan mararka qaarkood waa habeen hurdo la'aan iyo xanuun joogto ah carruurta mamochek-, laakiin tani waa ku meel gaar ah oo dhan. Waxa ugu weyn ee laga soo bilaabo yaraantooda ay u abuurto in carruurta xirfadaha lagama maarmaanka ah iyo bislaada kids ka weyn gargaarana weyn u roditeley- arrimaha gudaha iyo waxbarashada ee walaalaha ee yar yar iyo qoyska sester.Takie aad saaxiibtinimo, waxay jecel yihiin boqor-saaxiibnimo ah, horumarinta deg deg ah ee is-tiirsanaanta, iyo sida Xukunka rabitaanka inuu qof ahaan u koro, mustaqbalka, kuwan waxaa lagu qabtaa nolosha dadka mudnaanta leh.
Qoys badan oo waaweyn - marka ay tani tahay cunug 3-4 iyo farqiga da'da ee caruurta yar yar, tani caadi waa. Laakiin goorma ayay carruurtu dhab ahaantii leeyihiin wax badan, naas nuujin ilaa qof weyn? Carruurta waaweyn sida gargaare, mashquul ku dhasha, iyo baahida loo qabo in ay noqon ka badan si ay ula xiriiraan facooda iyo qoyska haya waajibaadka waalidka daryeelka ilmaha. qoyska Large - waxaa codadka aasaas ahaan, ugu muhiimsan, in ay ka xoog iyo rabitaan ay u dhisaan mid kasta oo noloshiisa u gaar ah, si ay u leeyihiin qoyskeyga, carruurtayda. "Hooyo, aniga iyo caruurtiina waa la quudiyay" - Waxaan maqlay sheekada gabadha ugu weyn oo ka timid qoys ballaaran.
Waxaan sidoo kale ku koray qoys ballaaran. Hooyo, waxaan horeyba u ahaa caruurta 6. Anigu waxaan ahay kan ugu da'da weyn. Waxay ka caawisay hooyaday inaan barbaarin. Waqtigiisa xorta ahaa wax badan ma uusan aheyn. Xaqiiqdii way adagtahay, gaar ahaan qorshaha maaddada ... Laakiin hadda, markaan korinnay, waan isqabay - way fiicnaayeen, waxaannu leenahay qoys aad uwanaagsan, waanu is caawinnaa, had iyo goor ayaanu isu tagnaa guriga waalidka. Hooyo waa ogyahay inaanay waligeed kaligeed noqon doonin, waxay dareemeysaa taageeradayada!
Ruushku wuxuu diyaar u yahay in uu ka doodo xakamaynta hubka, ayuu yidhi Klintsevich
Dalxiis ka yimid Jarmalka ayaa ka badbaaday cunto la'aan taiga taiga
In Hindiya, in ka badan dadka 40 ayaa ku hoos jira burburka guri burburay
Maamulka Talyaaniga si dhab ah ayey u qaadaan Roma
Ruble ayaa saadaaliyay burburka
Gobolka Irkutsk in kabadan 1000 qof oo 36,5 ah ayaa heley lacag bixin lacageed.
Qorshaha lafagurida ee dooxada Volgograd
Dhibaatooyinka hagaajinta baabuurta Volvo
Adeegyada xisaabinta ee Almaty - habka xirfadeed
Gaadiidka xamuulka ah ee Kiev ka soo shirkadda Maxfort
Khasnaje xirfadlayaal ah: waxa takhasus leh uu aqoon iyo karti u leeyahay